आजको दिन – Page2– ॥जे देखियो, त्यै लेखियो॥
Posted on July 10, 2018 by bhupendra_nirajan
जसरी हुन्छ निहुँ चाहियो, आफ्नै भागमा घ्यू चाहियो! (२६ असार २०७५। बुढानिलकण्ठ)
Posted in आजको दिनTagged घ्यू, निहुँLeaveacomment
Posted on June 25, 2018 June 25, 2018 by bhupendra_nirajan
तात्तातो संवादः – तपाईँको नानीको रिजल्ट के भो? – ३.७५ जिपिए – त्यो भनेको कति प्रतिशत हो? – सुन हो र तोलामा पनि ग्राममा पनि जोख्नु? #सक्किगोन्त 😂🙏🌿 (११ असार २०७५। बुढानिलकण्ठ)
Posted in आजको दिनTagged जिपिएLeaveacomment
Posted on June 24, 2018 June 24, 2018 by bhupendra_nirajan
रवि लामिछाने अमेरिकन हुन या नेपाली- विवाद गर्दै गरे हुन्छ। रवि लामिछाने आफैँ पुलिसको, प्रशासनको, अदालतको झैँ गर्छन की गर्दैनन्- विवाद गर्दै गरे हुन्छ। रवि लामिछानेको भाषा, दम्भ, प्रश्तुती, तरीका ठीक छ की छैन- विवाद गर्दै गरे हुन्छ। यसमा मेरो कुनै आग्रह/पुर्वाग्रह छैन। तर, एउटा पिडित नागरिक पुलिस, प्रशासन, अदालत जान छाडेर किन रवी लामिछाने Read more about कुरी कुरी[…]
Posted in आजको दिनTagged अमेरिकन, रवी लामिछानेLeaveacomment
Posted on June 19, 2018 June 19, 2018 by bhupendra_nirajan
गरेर नसकिने – चिन्ता! मारेर न सकिने – माया!! (५ असार २०७५। बुढानिलकण्ठ)
Posted in आजको दिनLeaveacomment
Posted on June 17, 2018 by bhupendra_nirajan
एक पटक मर्ला मान्छे कर्म फुट्यो भने, पटक पटक मर्छ यदि आफ्ना छुट्यो भने! (३ असार २०७५। बुढानिलकण्ठ)
अफ्ट्यारो मान्छे हुँ
Posted on June 14, 2018 June 15, 2018 by bhupendra_nirajan
ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास गर्छु र मनले पुज्छु। मलाई वेद आदि ग्रन्थमा उल्लेखित मन्त्रमा विश्वास लाग्छ। इमान्दार पण्डित मार्फत घरमै पूजाआजा गर्दा र तिनले शुध्द उच्चारण गरेका मन्त्रको तरङ्गले मलाई उर्जा दिन्छ। तर पूजाका अति कठोर बिधी र प्रकृयामै मात्रै सिमित रहेर रन्थनिन मन लाग्दैन। कुनै बेला खुबै गईयो, तर आजकल मन्दिर जान खासै रुची लाग्दैन। Read more about अफ्ट्यारो मान्छे हुँ[…]
Posted on June 9, 2018 by bhupendra_nirajan
– तपाईँ कसको समर्थक? – मेरै! – हैन क्या, फूटबलका कुरा गरेको! – ए, विमल घर्तीमगरको। – हैन क्या, कुन देशको फ्यान? – उषा फ्यान, चलेकै छ। – नो नो, बलका कुरा गरेको! – ए, सन्दीपलामिछाने मन पर्छ – हत्तेरिका, फुटबलको वर्डकप क्या, हेर्नुहुन्न? – हेर्छु – अनि कसको समर्थक? – मेरै #जस्तालाईतेस्तै 🤣🤣
Posted in आजको दिनTagged फूटबल, फ्यान, वर्ल्डकप, संवादLeaveacomment